အဲဒီမှာဝဘ်ပေါ်မှာဤမျှလောက်များစွာသောညစ်ညမ်းဆိုဒ်များဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူတို့ယနေ့၏ယောက်ျားကိုနှစ်သက်ဖို့အမျိုးအမျိုးမျိုးဆောင်ခဲ့ရမည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နည်းနည်းခေတ်မမီတော့ရဖို့စတင်သည်။ အခုတော့အားလုံးကစားအကြောင်းကိုဖွင့်ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းဂိမ်းအပေါ်အပူဆုံးခေါင်းစဉ်ရှိသည်,သင်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့သောအော်ဂဇင်ဘို့လိုအပ်သမျှသောအကြောင်းပြချက်များပေးမည်ကိုလည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးခံစား၏ဤနည်းလမ်းသစ်နှင့်အတူသင်၏ညစ်ညမ်းပြွန်အစားထိုးဘို့။ ကျနော်တို့အင်တာနက်ကိုပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်ညစ်ညမ်းအပေါငျးတို့သအမာခံအမျိုးအစားများရှိသည်။, ငါတို့ရှိသမျှသည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းလိင်ပြွန်ပေါ်တွင်တွေ့လိမ့်မည်အမျိုးအစားများရှိသည်ငါတို့လိင်ဂိမ်းကစားခြင်းလောကတွင်သို့မဟုတ်ဟန်းနီးမွန်းကမ္ဘာတွင်လူကြိုက်များသောအမျိုးအစားများရှိသည်။ တဖန်သင်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းအမျိုးမျိုးကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆိုင်ရာဂိမ်းများ၊ပရိုဂရမ်းမင်းဂိမ်းများ၊စာသားအခြေပြုဂိမ်းများနှင့်ပင်ပဟေဠိဂိမ်းများနှင့်ပိုမိုများပြားသည်။
ထိုအသင်သည်သင်၏ဘရောက်ဇာ၌ရှိသမျှသောဤဂိမ်းကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထို႔ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္မည္သည့္ကိရိယာတြင္မဆိုလက္ဝါးကပ္တိုင္ပလက္ေဖာင္းကစားျခင္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးေသာမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားျဖစ္သည့္ကြန္ပ်ဴတာ၊စမတ္ဖုန္းသို႔မဟုတ္တက္ဘလက္ျဖစ္သည္။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်ကျနော်တို့ရှိသည်သောဂိမ်းလည်းအားလုံးလှုပ်ရှားမှုချောမွေ့နှင့်ဂိမ်းကစားပိုပြီးရှုပ်ထွေးစေမည်ကြောင်းအံ့သြဖွယ်ဂရပ်ဖစ်နှင့်အချို့သောလက်တွေ့ကျကျရူပဗေဒအင်ဂျင်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေကြသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးအမှုအရာအရာအားလုံးအခမဲ့သင်တို့ဆီသို့လာဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ငွေပေးချေမှုမပါဘဲ,ဒါပေမယ့်လည်းအဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူမသာသင်တို့ဆီသို့ကအားလုံးကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။, သင်ပင်ရိုးရှင်းသောဧည့်သည်အဖြစ်အဘယ်သူမျှမအကောင့်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များကိုပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ကစားပေါ်တွင်သင်စောင့်ရှောက်မည်သမျှသောဤဂိမ်းရှိသည်ကြောင့်သင်ယခုမှအစည်းအဝေးများချွတ်သင့်ရဲ့လူရှုပ်စုစည်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်တို့သည်ငါတို့၏ဂိမ်းကစားနေစဉ်မိနစ်အတွင်းသွားတိုက်လိမ့်မည်ဟုဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာ,သင်သည်လည်းပြီးနောက်ကစားစောင့်ရှောက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်,သစ်တစ်ခုအော်ဂဇင်လိုက်ဖမ်းပြီးတော့နံနက်ယံ၏ဒေါကျတာသင့်အခန်း၏ပြတင်းပေါက်ထိမှန်လိမ့်မည်သည်အထိနောက်ထပ်တ.
ထိုအကြှနျုပျတို့နေပါစေသင်တို့မျက်နှာသာအဘယ်အရာကိုမျိုး,ငါတို့သည်ဤစုဆောင်းမှု၌သူတို့ရှိသည်သေချာပါသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်အပေါ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏မည်သည့်အမျိုးအစားခံစားရန်ရလိမ့်မယ်,ဆယ်ကျော်သက်သားငယ်များမှဦးချိုရင့်ကျက်ဖို့. သင်ပင်ဤမိန်းကလေးများစိတ်ကြိုက်ရ,ထိုထုံးစံရွေးချယ်စရာသင်တို့အဘို့စံပြအမျိုးသမီးကိုဖွင်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုငါပေးမည်။ သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစား,ဆံပင်နှင့်မတ်မတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အပြင်,သင်ပင်ဤဂိမ်းများတွင်လူမျိုးစုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အခါအခြင့္သင့္လွ်င္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀က္ဘ္ဆိုက္၏စုစည္းမႈသည္အရာအားလံုးကိုဖံုးအုပ္ထားသကဲ့သို႔ေတာေတာင္ေရေျမတို႔ကိုဖံုးအုပ္ထားသကဲ့သို႔ေတာေတာင္ေရေျမတို႔ကိုလည္းဖံုးအုပ္ထားသကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ကျနော်တို့ဂူးဂဲလ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဂိမ်းများ၊ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ပင်ဆက်ဆံရေးကိုကိုက်နှင့်အတူ။ ငါတို့သည်လည်းသင်ကစားချင်အံ့သောငှါလူအပေါင်းတို့သည်မဖွယ်လိင်ဂိမ်းများ၊ဖေဖေသမီးစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူ၊မေမေသားလိင်အစည်းအဝေးများနှင့်ပင်အစ်မ၊ဂိမ်းများ။ ငါတို့သည်လည်းသင်မိန်းကလေးများသင့်ရဲ့ကျွန်စေနှင့်မာစတာသို့မဟုတ်ဒိုမီနိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုခုအဖြစ်ဂိမ်းကစားပျော်မွေ့နိုင်သည့်အတွက်အချို့သောဘီအမ်အိပ်ဂိမ်းရှိသည်။, သငျသညျရိုင်း,ကြံ့ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်အချို့သောကိုယ်ဝန်ဆောင်သားငယ်များ,သင်ခြေကစားခံစားနိုင်,ငါတို့သည်သင်တို့အပျော်တမ်းစိတ်ကြိုက်နိုင်သည့်အတွက်လိမ်လိင်ဂိမ်းရှိသည်နှင့်သင်မုဒိမ်းမှုအခန်းကဏ္ဍကစားသို့မဟုတ်စိတ်ထိန်းချုပ်မှုဂိမ်းကဒီဆိုက်ပေါ်မှာဘယ်လောက်အစွန်းရောက်ယုံကြည်မည်မဟုတ်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆိုဒ်တွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပူဆုံးလိင်ဂိမ်းများရှိပြီး၎င်းတို့အားလုံးကိုအခမဲ့ပေးသည်။ သင်လိုချင်သည့်အချိန်မရွေးလာကစားနိုင်ပြီးသင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းကိုအခြားကစားသမားများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းကိုခံစားနိုင်သည်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီဂိမ်းအောက်မှာမှတ်ချက်ကဏ္ဍများရှိသည်နှင့်သင်ချည်အမျိုးမျိုးတို့ကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုတက်ကြွစွာရှိရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏ဖိုရမ်ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဤဆိုဒ်ပေါ်ရှိအရာအားလုံးကိုအမည်မသိဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ထံသို့သွားရောက်သောအခါသင်၏အိုင်ပီလိပ်စာကိုပင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိပါ။ ကစားလာကြ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခက်ခဲသွားပါစေ!